IiNdawo ezi-6 zokugxila kwi-Healing Holaling
Iintsika ze-6 ze-Holistic Healing
Ukuphucula impilo yakho yonke kufuneka ukuba utshintshe ingqwalaselo yakho kwiinkalo ezininzi zobomi bakho. Ngokuzigxininisa ngokubhekiselele kwimpilo yakho yengqondo, ngokomoya, emzimbeni nasentlalweni, kunye nenjongo yobomi kunye nemeko, unokuqala ukufumana ukulinganisela nokuvisisana ebomini bakho. Ngezantsi, sinika iingcebiso zokukunceda ukuba uqalise. Qala ngokugxila kwelinye ngexesha, ukwenza umzamo okhoyo phakathi kweendawo ezahlukeneyo.
Gxila kwiMpilo yengqondo
Cinga ukucamngca njengendlela yokuphucula ingqalelo, ukunciphisa uxinzelelo, nokuqinisa ulwazi lwakho.
Yeka ukuqokelela amagama awonakalisayo . Njengoko ukucima indlu yakho ye-clutter yakho engadingekanga kunokusinceda sifumane ingqwalasela kunye nenjongo, ukuvumela ukuhamba kweengcamango ezimbi oye wazibamba kuzo kunokukunceda ukukhulula umzimba wakho wengozi.
Khumbula ukuba izinto ezimbi zenzeka kubantu abalungileyo. Ngexesha elizayo xa uvakalelwa kukuba indalo iyakucinga ngokungafanelekanga, thatha umoya kwaye ujonge ukuba uhlawula i karma kunokuzibuza "Kutheni na?"
Gxila kwiMpilo Yokomoya
Qala ukuhlawula ngakumbi amaphupha akho. Kuninzi esinokuyifumana ngokuzijonga ngokweengqondo zethu ezingenangqondo. Iphupha eliphindaphindiweyo linokubamba intsingiselo ejulile. Phakamisa amaphupha akho ngentsasa nganye kwaye ucinge ngeentsingiselo zazo. Unokucinga kwakhona ukugcina iphephancwadi yephupha.
Qaphela imiphumo ye- karmic kwaye ugxininise ukuziphatha okukhuthaza ukuvisisana nokulinganisela.
Khawuqwalasele utshintsho lwegama elingokomoya . Ngamanye amaxesha, utshintsho lwegama lunokunceda abantu bengazi kakuhle ukuba ngubani na okanye bakhonza njengento ebalulekileyo ukuba bahloniphe ukuba bafika phi.
Ukuphucula ukuqonda kwakho izinto ezine ezisisiseko zokukunceda uqonde amandla akho kunye nobuthathaka. Amasiko amaninzi nokuphilisa kunye neenkolo zibandakanya izinto kwizenzo zabo.
Gxi ninisa kwiMpilo yeMpilo
Sebenzisa izixhobo zendalo zempawu ezinjengeentloko, intlungu yomzimba , kunye nemiba encinci yokutya. Unokuqala ngokudala yakho ikiti yokuphilisa epheleleyo .
Fumana ukuba umgaqo-nkqubo we-inshorensi yempilo ibandakanya iindlela ezifana neyeza zamandla, ukuguqula umzimba, kunye nokunyanga.
Cinga ulwaphulo lweedrama njengendlela yokudibanisa neziqu zomzimba wakho.
Gxila kwiMpilo yeNtlalo
Ukuvavanya ubuphi ubudlelwane ebomini bakho bunenzuzo kuwe kwaye ziyingozi kakhulu. Umgaqo wokuzibonakalisa ngokomoya ungakunceda wenze oku.
Cinga nge- yoga ye-tantric okanye i-tantric yesini ukuphucula impilo yakho yesondo kwaye uqinise ubudlelwane obusondeleyo kunye nomlingane wakho.
Zama ukuqinisa ulwalamano lwakho kunye nomlingane wakho usebenzisa inkqubo yokuxolelana nomphefumlo . Ukucela umphefumlo wakho ukuba uthethe umphefumlo womnye ngenxa yakho unokukwazi ukukunceda ukuphucula ukuxhumana ngokuthe ngqo kwixesha elizayo.
Gxininisa ekufumaneni Injongo Yakho
Ukuphucula ingqalelo yakho. Sebenzisa ezi zicwangciso ukuqeqesha ingqondo yakho ukuhlala kwindlela kwaye uvelise ngakumbi.
Funda ukudibanisa nomntu wakho ophakamileyo . Ubuntu bakho obuphezulu akuyiyo into ehlukeneyo kuwe, ininzi kakhulu inxalenye yakho. Ukuqhagamshelana nalo mntu ophakamileyo kuyimfuneko ebalulekileyo ekufumaneni inyaniso yakho.
Funda ukuwamkela ukungaqiniseki. Kubalulekile ukuba kulungelelaniswe neenjongo zethu kwaye sihlale sigxininisekile, kubalulekile ukuba sifunde ukuba samkela njani ukutshintshwa kweso sihlandlo ngokukhawuleza.
Gxila kwiKhaya lakho kunye neNgqongileyo
I-Chakra blockages ivame ukujongwa yimeko yokungafaniyo kwamagumbi ahlukeneyo ekhaya lakho. Ukufumana ibhalansi enkulu ebomini bakho ngokutshabalalisa nokucoca indawo yakho yasekhaya ngokwemiqathango.
Zama ukususa amanqweno enobungozi obuninzi, njengamaphunga kunye nemveliso enamakha, ukusuka kwimpilo yakho yemihla ngemihla.
Cinga ngeendlela zokufumana iindawo ezinqatshelwe ekhaya okanye ufumane nezinto ezilahlekileyo.
Ingaba kutshintsha kwemozulu kunye nokufudumala kwihlabathi elifanayo?
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala Zase-Arkansas
Iintetho ze-15 eziPhezulu zoPhulo lwabafundi